Orinasa fitomboan'ny volo laser - Mpanamboatra fitomboan'ny volo Laser, Mpamatsy
650nm 808nm Laser sy milina fitomboan'ny volo / masinina fitomboan'ny volo laser ho an'ny fitsaboana volo very
Ny fitsaboana laser amin'ny haavo ambany dia endrika azo antoka amin'ny fitsaboana maivana / hafanana dinihina amin'ny famantarana fahasalamana isan-karazany. Izy io dia ampiasaina mba hitsaboana ny endrika fototarazon'ny fihenan'ny volo fahita amin'ny lehilahy sy ny vehivavy, androgenetic alopecia na pattern balding.
Ny fitsaboana amin'ny laser ambany dia antsoina koa hoe fitsaboana maivana mena, laser mangatsiaka, laser malefaka, biostimulation ary photobiomodulation.
milina laser farany ambany farany ambany anti-volo fitsaboana rafitra milina 650nm diode laser fitomboan'ny volo
Famantarana: ampiasaina amin'ny…
1. Fitsaboana ny fihenan'ny volo ary mampitombo ny hamafin'ny volo ho an'ny lahy sy ny vavy
2. Fitsaboana ny fihenan'ny volo ateraky ny endocrine be loatra
3. Fitsaboana ny fihenan'ny volo ateraky ny olana miteraka aretina sy aretina
4. Fitsaboana ny fihenan'ny volo aorian'ny fiterahana
5. Fitsaboana ny aropecia areata, hampitombo ny hamafin'ny volo sy ny fikolokoloana volo aorian'ny famindrana volo.
laser ary nitarika milina fitsaboana fatiantoka volo
1. Manotra loha, manamaivana ny hozatry ny loha, manentana ny
2. Ampandehano ny papilla dermal
3. Hamafiso ny fiasan'ny papilla volo
4. Mampiroborobo ny fiterahana sela follicle volo
5. Manara-maso ny tsiambaratelon'ny fihenan'ny sebaceous
6. Ampitomboina ny fizarazaran'ireo sela renin'ny volo
Sano CE Nankatoavina amin'ny fitsaboana volo volo LLLT masinina fitomboan'ny volo / Fitomboan'ny volo laser
Masinina fitomboan'ny volo karazana laser roa ary mitarika telo
Laser laser 650nm: Modulate ny follicle volo, manatsara ny fahaiza-mamerina ny fibres collagen ary mampiroborobo ny metabolism.
Laser 808nm IR: manafaingana ny fivezivezen'ny rà, mampiroborobo ny fifohana otrikaina, manatsara ny fahasalaman'ny loha sy ny kalitaon'ny volo
Jiro jiro mena: afaka mampitombo ny asan'ny sela, mampiroborobo ny metabolisma sela, manafaingana ny fivezivezy ao anaty, mifehy ny famoahana menaka.
Jiro LED mavo: Miaraka amin'ny halavan'ny onja 580nm dia afaka manamaivana sy mitsabo tsara ny hoditra marefo
Fahazavana LED manga: mamono bakteria pathogenika volo amin'ny fomba mahomby, mamono ireo holatra miafina sy rajako miafina lalina ao anaty folikelin'ny volo
SH650-1 Laser haavo ambany + Milina fitomboan'ny volo LED amin'ny fitsaboana volo
Ny SH650 Laser Hair Therapy no fitaovana fitsaboana laser ambony loha maivana sy mahomby indrindra azo raisina eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Amin'ny fampiasana laser 650nm diode (5mw), laser 808nm IR (5mw) ary karazana LED telo, SH-650 dia manana ny fahaizana mandanjalanja tanteraka ny hodi-doha iray manontolo ary manome hery ampy hidirana tsara amin'ny volo, amin'izay dia hampitombo ny vokatra ho an'ny marary. .
Fitsaboana fitomboan'ny volo laser- fitsaboana volo amin'ny laser amin'ny laser Sano
Ny fitsaboana volo laser dia mampiasa laser misy kilasy fitsaboana mba hanomezana hazavana laser tsy miovaova amin'ny loha. Ny fitsaboana laser dia mitovy amin'ny zavamaniry manondraka. Toy ny rano sy ny otrikaina entin'ny zavamaniry, ny angovo maivana dia entin'ny folikelin'ny volonao mba hahafahan'ny volo hitombo. Rehefa raikitra ny hazavana dia mitombo ny microcirculation, noho izany mizara famatsian-dra be loatra sy otrikaina amin'ny follicle volo. Ny hazavana amin'ny haavo ambany dia manentana ny asan'ny sela ao anaty folikelinao hanampiana hampihena ny fihenan'ny volo raha manampy ny volo indray.
Laser 808nm laser 650nm milina fitsaboana volo amin'ny alàlan'ny teknolojia LLLT
Ny LLLT dia fitsaboana maoderina tsy fandidiana maoderina izay mampiasa hazavana amin'ny laser hamporisihana ny fitomboan'ny sela sy ny follicle volo. Manampy amin'ny ady amin'ny fihenan'ny volo sy fanatsarana ny habeny sy ny fisehoan'ny volo. Tsy maharary ilay fitsaboana ary tsy misy vokany ratsy fantany.
LLLT dia nankatoavin'ny FDA ho fitsaboana volo ho an'ny lahy sy ny vavy. Izy io dia ampiasaina indrindra amin'ny fitsaboana alopecia androgenetic na izay matetika antsoina hoe lahy na vavy.
masinina laser fitomboan'ny volo amin'ny masira laser vehivavy / lehilahy fitaovana fitomboan'ny volo avy amin'ny laser Sano
Laser Hair Therapy dia fitsaboana tsy simika, tsy manafika izay matetika ampiasaina amin'ny fitsaboana ny fihenan'ny volo. Ny LLLT (fitsaboana laser amin'ny haavo ambany) dia atolotry ny fitaovana iray misy takelaka misy lasera mamirapiratra eo amin'ny hodi-doha. Ny masinina fitomboan'ny volo laser SH650-1 dia rafitra fitsaboana fatiantoka volo amin'ny laser avo lenta, miorina amin'ny teknolojia laser diode haavo ambany 808nm.
SH650-1 laser fitsaboana volo amin'ny laser volo milina fitomboan'ny sano laser
Manafaingana ny fivezivezen'ny rà ho an'ny fanatsarana ny fitomboan'ny fibre collagen sy ny fitomboan'ny metabolism.
Ny laser 650nm sy ny 630nm PDT dia ampiasaina hanatsarana ny hetsika Adenosine Triphosphate (ATP) amin'ny vatan'ny subcutaneaux. ATP no fitaovana fampitana angovo lehibe anelanelan'ny sela hamporisihana ny metabolisma sela. Ny laser 650nm sy ny 625nm PDT dia mandrisika ny fikorianan'ny rà ary mitondra oksizena sy otrikaina ho an'ny follicle volo, raha misy laser 808nm manampy amin'ny fidirana - izay mampihena be ny fivoaran'ny volo.
Laser estetika Co2, Shr Ipl Opt, Co2 Laser Laser miato, Masinina mpanentana hozatra Ems, fanesorana ny holatra, Fanesorana volo Shr Opt Ipl,